Daraasaadka rooxaanta: Jaamacad Hindiya ku taal ayaa dhakhaatiirta u bilaabaysa - BBC News Somali
Daraasaadka rooxaanta: Jaamacad Hindiya ku taal ayaa dhakhaatiirta u bilaabaysa
Jaamacad sumcad weyn leh oo ku taal dalka India ayaa bixin doontaa kooras shahaado lagu qaadanayo oo la siin doono dhakhaatiirta, si ay u daweeyaan dadka sheegay in ay arkaan ama ay gashay rooxaantu (jinku).
Kooraskan oo lix bilood soconaya ayaa bisha Jeeniweri jaamacadda Banaras Hindu University (BHU) oo ku taal magaalada woqooyiga dalkaas ee Varanasi bilaabi doontaa.
Saraakiisha jaamacaddu waxay sheegeen in kooraskani xoogga saari doono cudurrada maskaxda ku dhaca ee badanaa lagu khaldo xaaladaha qayru caadiga ah.
Kooraska waxa bixin doonta kulliyadda daawooyin dhaqameedka qadiimka ah ee Hindu-ga oo Ayurveda la yidhaa.
Sarkaal ka tirsan jaamacadda BHU ayaa wakaaladda wararka ee IANS u sheegay in qayb gaar ah oo la yidhaa Bhoot Vidya oo macnaheedu yahay Daraasaadka Rooxaanta Jaamacaddu aasaastay.
"Bhoot Vidya waxa takhasuskeedu noqon doonaa cudurrada maskaxda iyo kuwa aan la garan karin sababaha keena iyo sidoo kale xaaladaha nafsaaniga ah" ayey tidhi Yamini Bhushan Tripathi oo ah hormoodka kulliiyada Ayurveda ee saa jaamacaddu.
Waxay intaa ku dartay in jaamacaddu tahay tii ugu horraysay dalkaas ee bilowda bixinta kooras noocaas ah, kaas oo dhakhaatiirta lagu bari doono "daawo dhaqameedka qadiimka ah ee lagu dabiibo cudurrada rooxaantu keento".
Dabiibka Ayurveda wuxu badanaa ka kooban yahay daawo dhaqameed dhir ah, cuntooyinka oo wax laga bedelo, duugid, qaabab loo maydho iyo noocyo kale oo jimicsi ah.
Sida lagu ogaaday daraasad 2016 uu sameeyey Mac-hadka Caafimaadka Maanka iyo Dareen Wadka Inida oo magaciisa loo soo gaabiyo NIMHANS, ku dhawaad 14% dadka India waxay qabaan cudurruada dhimirka ku dhaca. Sannadkii 2017 waxay ay hay'adda caafimaadka aduunka ee WHO u qiyaastay in 20% dadka India noloshooda mar ka mid ah qulub ku dhacay.
Laakiin dhakhaatiirta ku takhasusay caafimaadka maskaxda ee alku waxay tiradood ka yar tahay 4000 dhakhtar dalka tirada dadkiisuna waxa weeyi 1.3 bilyan oo qof, waxaana intaa dheer in aan dadku wax badan ka aqoon cudurrada maskaxda ku dhaca.
Dhanka kalena maadaama oo qofku takoor ka muto bulshada dad tiro yar uun baa dhakhtarrada u taga. Laakiin dadka India badankoodu gaar ahaan dadka ku nool miyiga iyo dan yartu waxay u tagaan fooxisooyika oo ay iska dabiibaan.
Warkan ka soo baxay jaamacadda BHU ee dawladdu leedahay ee ah in ay bilaabi doonto kooras ah Bhoot Vidya dadku durba calaamad su'aal ayay geliyeen oo baraha bulshadu ku xidhiido ee internet-ka ayaa lagu hadal hayaa. Waxaanay dadka qaar ku doodayaan in dawada casriga ah iyo daryeelku ay ku haboon yihiin in lagula tacaalo cudurrada maanka ku dhaca.